निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण फेर्न सकिएन - Karobar National Economic Daily
query_builderApril 27, 2017 1:16 PM supervisor_account visibility539
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने खुबी भएका थोरै व्यवसायीमध्येका एक हुन् ।
औद्योगिक वातावरण, कच्चापदार्थ, श्रम, कर तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे सधैं प्रस्ट धारणा राख्ने उनी निजी क्षेत्रकै कमजोरीबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा कहिलेकाहीँ आलोचितसमेत हुने गरेका छन् ।
महासंघको १८ औं अध्यक्षका रूपमा झन्डै दुई वर्ष निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेका मुरारकाले आफ्नै कार्यकालमा विधान संशोधन गर्दै महासंघ नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सफल भए । मुरारका अर्गनाइजेसनका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका मुरारकाले सिमेन्ट, रड र पेन्टलगायतका उत्पादनमूलक उद्योग तथा ट्रेडिङ र सेवामूलक व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
करिब डेढ दशक महासंघमा रहँदा उनले कार्यकारिणी समिति सदस्य, एसोसिएट उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्को सभापति एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । महासंघको राजनीतिबाट मारवाडी समुदाय विरक्तिएका बेला दुई दशकपछि नेतृत्व लिएका उनले यस क्षेत्रमा सबैको अपनत्व महसुस गराउन सकेका छन् । भूकम्पले मुलुक तहसनहस भएका बेला नेतृत्व लिएका उनले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुप-यो ।
तत्कालीन सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग संवाद स्थापित गराउनसमेत अग्रसर रहेका मुरारका हाल भने महासंघको राजनीतिबाट फुर्सद भएपछि आफ्नै व्यवसायमा बढी व्यस्त देखिन्छन् । निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकासँग महासंघसहित समग्र उद्योग–व्यवसायका विभिन्न पक्षबारे कारोबार सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी :
महासंघमा डेढ दशकदेखि प्रत्यक्ष आबद्ध रहेर नेतृत्वमा पुग्दै अब भने निवर्तमान अध्यक्ष हुनुभएको छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
महासंघमा मैले १४ वर्ष अथवा ५ टर्म पूरा गरेको छु । नेतृत्वमा रहेर २१ महिना काम गरेँ । भर्खरै चुनाव सकिएर नयाँ नेतृत्व पनि आएको छ । मलाई के लाग्थ्यो भने चुनावका बेला सधैँ केही भइहाल्छ कि वा केही विवाद आइहाल्ने हो कि जस्तो हुन्थ्यो ।
तर, छोटो समय नेतृत्वमा रहे पनि महासंघमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा राम्रोसँग कुनै विवादरहित तरिकाले सम्पन्न भएको छ । कुनै मुद्दा–मामिला नभई चुनावबाट नयाँ नेतृत्व आएको छ, यसैमा निकै खुुसी लागेको छ ।
अर्को राम्रो पक्ष पूर्वअध्यक्ष विनोद चौधरी धेरै वर्षपछि महासंघमा आउनुभएको छ, यो समग्र निजी क्षेत्रका लागि खुसीको कुरा हो । अर्का पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको विषय पनि विवादित थियो, त्यसलाई पनि मैले टुंगो लगाएँ । यीलगायत पुराना विवाद र झन्झटहरू सबै समाधान भइसकेका छन् । नयाँ आउनुभएका अध्यक्षले महासंघमा पुराना विवाद हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । मैले विवादरहित भएर काम गरेँ, यही नै राम्रो पक्ष हो ।
तपाईंको कार्यकालमा गरेका धेरै काममध्ये सम्झनयोग्य काम के–के हुन् ?
मैले निकै कठिन परिस्थितिमा महासंघको नेतृत्व सम्हालेको हुँ । भूकम्प आउँदा म कार्यवाहक अध्यक्ष थिएँ । त्यो बेला हामीले जति काम गर्न सक्यौं, त्यसमा मलाई सन्तोष नै छ । संविधानको मस्यौदा आउँदा डरलाग्दो खालको थियो । यदि मस्यौदामा आएका सबै विषयमा संविधानमा आएको भए खुला बजार अर्थतन्त्र रहन्थ्यो कि रहँदैनथ्यो भन्ने लाग्छ ।
सबै नेतालाई भेट्नेदेखि लिएर छलफल गर्ने काम गरेँ । त्यो बेला सयभन्दा धेरै बैठक भए होलान् । संविधानका विषयमा मैले धेरै मेहनत गरेको छु, जुन मेहनत आज निजी क्षेत्रका लागि खुसीको विषय बनेको छ । व्यवस्थापनमा टे«ड युनियनको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने थियो, केन्द्र तथा प्रदेश दुवैले कर उठाउन पाउने भन्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था भइदिएको भए अहिले ठूलो विवाद आउने थियो । भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर एउटा मात्रै निकायले उठाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई अहिले सरकारले अगाडि ल्याएको छ । यीलगायत धेरै काम भएका छन् । यस्तै, सीएनआईसँग पानी बाराबारको अवस्था थियो । चेम्बरसँग पनि सम्बन्ध त्यस्तै थियो । अहिले हामी सबै व्यवसायीको उद्देश्य एउटै छ । निजी क्षेत्रको भलाइ र स्थायित्व कसरी दिने भन्ने नै हामी सबैको मुख्य उद्देश्य भएको छ ।
तपाईंले गर्न नसकेका काम के–के हुन्, जुन अबको नेतृत्वले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ?
हामीलाई कार्यकारी अधिकार छैन । हामीले लबिङ गर्नेबाहेक अरू केहि गर्न सक्दैनौँ । हामीले आफ्नो कुरा सरकारसँग दह्रो रूपमा राख्ने नै हो । मैले निजी क्षेत्रको भलाइका लागि बोल्ने, लबिङ गर्नेदेखि पुग्नुपर्ने सबै ठाउँमा आवाज पुयाएको छु । तर, ती कुरा कतिपय पूरा भए भने कतिपय हुन सकेका छैनन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि फेरिएको छैन, यसमा मैले काम गर्न सकिनँ कि भन्ने लाग्छ । उद्योगी–व्यवसायीको प्रमुख उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो ।
कर तिर्नु, रोजगारी दिनुलगायतका विषय ‘बाइडिफल्ट’ आउने कुरा हो । प्राइमरी उद्देश्य नाफा कमाउनु हो, नाफा कमाउन रोजगारी दिने हो भने नाफाबाट आएको रकम सरकारलाई कर पनि तिर्ने हो । मैले समाजसेवा गर्न उद्योग सञ्चालन गरेको होइन । सर्वसाधारणले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिए पनि सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण भने फेर्न सकिएन ।
उद्योग क्षेत्रका लागि अन्तरमन्त्रालयमा हुनुपर्ने समन्वय अझै भएको छैन । कतिपय नियम–कानुन व्याख्या गर्ने तरिका फरक भएको छ । मैले सरकारलाई दबाब दिन सकिनँ कि त्यतिबेलाको परिस्थिति नै त्यस्तै थियो र यी कामहरू पूरा गर्न सकिएन ।
तपार्इं महासंघमा प्रवेश गर्दा र अहिले नेतृत्वबाट बाहिर निस्कँदा जुन १४ वर्षको समयावधिमा महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठन बन्न सकेको छ त ?
महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठन बन्न सकेको छ । महासंघको पदमा कामभन्दा ‘ग्ल्यामरस’ अलि बढी भएको हो । स्थानीय चुनाव हुन नसक्दा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा बढी राजनीति भयो ।
जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो । बाहिरबाट हेर्दा राजनीतिक असर नपरेजस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन्नेदेखि काम गर्ने कुरामा राजनीति हाबी भएको छ ।
यो पद यो पार्टीले भन्ने खराब कुरा हाबी भएको छ । तर, यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रलाई समेटेर जाने कुनै संस्था छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नै छ । हामी सबै वर्गलाई समावेश गर्छौं । सबै क्षेत्रलाई समेटेर लगेका छौं । समाजको आस्था पनि महासंघप्रति छ । सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन हुने कारणले कतिपय हाम्रा कुरा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । समग्रमा भन्दा महासंघको उचाइ बढेको छ, घटेको छैन ।
राजनीतिक पार्टीहरू उद्योगीकहाँ आएको होइन, तपाईंहरू नै राजनीतिक पार्टीमा गएर तालाचाबी सुम्पेको भन्ने आरोप छ नि ?
जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा राजनीति हाबी भएको हो । केन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने म केही हदसम्म स्वीकार गर्छु । तालाचाबी नै त नबुझाइएको होला । अर्काे कुरा, हाम्रा प्रमुख भोटर भनेको जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ नै हुन् । ५० प्रतिशत स्टेक उनीहरूको छ । महासंघमा १ सय ४ वटा जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ छन् । सबै त नभनूँ, ७० प्रतिशत कुनै न कुनै पार्टीसँग सम्बद्ध छन् ।
यस्ता भोटहरू राजनीतिक दलसम्म पुगेर लबिङ गर्ने काम भएको हुन सक्छ । म यसको विरोधी हुँ । यो विषयमा महासंघका सबै पदाधिकारी विरोधी नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । आज भोट माग्न गएपछि भोलि निर्वाचन जितेर उनीहरूसँग नै कसरी झगडा गर्न जाने, कसरी माग लिएर जाने कसरी काम गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ।
महासंघमा राजनीति हाबी नहोस् भनेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनाव गराउनुभयो, तर त्यहाँ पनि समस्या एउटै देखियो होइन ?
यो कुरा म मान्न तयार छैन । महासंघमा के हुन्थ्यो भने निर्वाचन सकेपछि निर्वतमान बाहिर जान्थ्यो । आफू अध्यक्ष हुँदा एउटा उम्मेदवार लिएर अगाडि बढ्ने र उसले हारेपछि निवर्तमान अध्यक्ष महासंघबाट बाहिर जाने प्रचलन थियो ।
तर, अब त्यो अवस्था रहन्न । विधान संशोधन भएको झन्डै तीन महिनापछि चुनाव भएको हो र यो व्यवस्थाबमोजिम पहिलो चुनाव हो । अब हुने चुनावमा यस्तो समस्या नरहला भन्ने मलाई लाग्छ । पहिलो पटक भएर चिर्न नसकेको हो कि । अबको चुनावमा प्यानल हराएर जान्छ ।
महासंघभित्र रहेको प्यानल मिलाएर साथै अरू संस्थालाई पनि समेट्दै निजीक्षेत्र एकढिक्का हुने भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामी निजी क्षेत्रका सबै संघसंस्थाको उद्देश्य एउटै हो । नेपालमा जति पनि उद्योगी–व्यवसायी छन् तिनले व्यापार गर्छन् र जति पनि व्यापारी छन् तिनीहरू पनि उद्योगमा आबद्ध छन् ।
विनोद चौधरी महासंघका आउँदा एकताको सन्देश त गएको छ नि । यसै साताको बजेट सुझावमा हेर्नुभयो भने महासंघ, सीएनआई, चेम्बर सबै मिलेर साझा धारणा राखेका छौँ । साझा रूपमा प्रस्तुत हुने क्रम बढेको छ । यसरी नै निजी क्षेत्र एकढिक्का भएर जाने हो ।
पछिल्लो समयमा उद्योगीहरू ट्रेडिङतर्फ आकर्षित भएका छन्, उद्योगीमा जोखिम लिने क्षमता घटेर यस्तो भएको हो ?
मेरो व्यक्तिगत कुरा हेर्नुहुन्छ भने म उद्योगबाट आएको हो । हामी यो क्षेत्रमा बसेको रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि नाफाका लागि हो । उद्योग गर्दा रोजगारी आफैँ जोडिएर आउने कुरा हो । मैले उद्योग सञ्चालन गरेर के पाएँ त ?
उद्योग चलाउँदा फ्याक्ट्रीमा बम पड्काइयो, कच्चापदार्थ ल्याउन ६ महिना समस्या झेल्नुपर्छ । मैले बैंकसँग ऋण लिएको छु, के मैले उद्योगी भन्न मात्रै लगानी गर्ने त ? वास्तवमा भन्दा उद्योगीहरूलाई रिक्स बियरिङ गर्ने क्षमता घट्दै गएको छ । कुनै पनि नियम–कानुनमा स्थायित्व छैन ।
आएका ऐन–नियमको व्याख्या अर्कै तरिकाले हुन्छ । संविधानलाई ऐनले काट्छ, ऐनलाई नियमावलीले काट्छ, नियमावलीलाई परिपत्रले काट्छ भने परिपत्रलाई हाकिमको तजबिजले काट्छ । उद्योगीहरूलाई स्थायित्व चाहिन्छ । कम्तीमा आफनो व्यवसायको भविष्यको अनुमान गर्न सक्ने अवस्था त हुनुप¥यो नि ।
मैले बुद्धि पु¥याएर व्यापार गरिनँ भने मेरो गल्ती हो, त्यसको घाटा मैले नै बेहोर्नुपर्छ । राज्यले किताबमा लेखेको कुरा पूरा भएन भने भन्न जाने ठाउँ कहाँ ? अदालतमा गयो, १० वर्ष लाग्छ । त्यतिवर्षसम्म बैंकबाट ऋण लिएको मान्छेले कसरी कुर्न सक्छ । यस्तै कारणले उद्योगीहरू टे«डिङमा आएका हुन् ।
यस्तै कुराको लबिङको लागी नै महासंघको भूमिका हो नि हैन र ?
मैले अघि पनि भनेँ, धेरै कुरा गर्न सकिनँ भनेर । मैले गर्न सकिनँ या देशको परिस्थिति नै त्यस्तो भयो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिटमा १४ खर्ब लगानी गर्ने इच्छा देखिएको छ । यो इच्छा कार्यान्वयन गर्न सहज छैन ।
अहिलेका नियम–कानुन, यहाँको सोच हेर्नुहुन्छ भने लगानी आउँदैन । पहिलेभन्दा सुधार भएको छ, तर लगानीका लागि पर्याप्त वातावरण भने भएको छैन ।
आजको दिनमा उद्योग लगाउने सोच्नुहुन्छ भने कम्तीमा दुई वर्ष सबै प्रक्रिया पूरा गर्दैमा ठिक्क हुन्छ । बैंकमा दुई वर्ष ऋण होल्ड गर्न त मिल्दैन । दुई वर्षपछि आउने उद्योग अहिले सुरु गर्छाैं, त्यतिबेला भायबल हुन्छ गर्र्छांै, भएन छोड्छौँ । तर, बाहिरबाट आएर लगानी गर्नेले त आजको आजै खोज्छ ।
यसमा महासंघ वा सरकार कसको कमजोरी भयो भन्ने ? यसका लागि सरकारमा बस्नेले हामीलाई उद्योग चाहिन्छ भनेर सोच्न नसकेरै यस्तो अवस्था आएको हो । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीले ‘मेड इन इन्डिया’ भनेर जुन अभियान लिएर आएका छन्, यस्तो भिजन त निजी क्षेत्रले लिएर आएको थिएन । त्यसैले राजनीतिले गाइड गर्नु पर्यो भनेको हो ।
के यसको अर्थ राजनीतिक असफलता भन्न खोज्नुभएको हो ?
राजनीतिक असफलताभन्दा पनि प्राथमिकता उद्योग क्षेत्र परेन भन्नु उचित होला । नौ महिनाको सरकार हुन्छ, उसले त्यो अवधिमा के गर्न सक्छ । उसले १० वर्षको योजना बनाएर त अगाडि बढ्दैन । जबकि मलाई मर्ने दिन थाहा छ भने मैले काम गर्दिनँ नि । मर्ने दिनसम्मलाई पुग्ने गरी मात्र काम गर्छु । जिन्दगीभर अमर भएर आए पो भिजनसहित काम हुन्छ । जब मर्ने समय थाहा हुन्छ तब मान्छेले काम नै गर्दैन ।
भनेपछि नेपालमा लगानीको भविष्य छैन ?
हरेक पार्टीले आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भनेर सोेचेका छन् । तर, सेन्स अफ अर्जेन्सी भने भएको छैन । ऊर्जासंकट केही हदसम्म भए पनि समाधान भएको छ । श्रमसम्बन्ध सुधार भएको छ । मेरो उपलब्धि पनि यसलाई मान्न सकिन्छ ।
रोजगारदाता र श्रमिक मिलेर ऐनको मस्यौदा बनाएका छाँै, यसरी दुई पक्ष मिलेर त कहीं पनि मस्यौदा बनाएको रकेर्ड छैन । यो किन नआएको ? यसमा राज्यले ध्यान नदिएको भन्ने प्रश्न हो । किन पास नभएको ? रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको सहमति भएर मस्यौदा बनेको छ भने पास किन भएन त ।
राज्यले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न नसकेको हो ?
हामी त धेरैभन्दा धेरै काम र नाफा लिन चाहन्छौँ । हामीबीच त प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि । हामी जहाँ अवसर पाइन्छ त्यहाँ लगानी गर्ने हो, ऋण खोजेर भए पनि अगाडि बढ्ने हो । अवसर भएमा लगानी गर्ने नाफा कमाउने र सरकारलाई पनि कर तिर्ने, बाँकी भएको पैसा पुनः लगानी गर्ने नै हाम्रो काम हो ।
यसरी त नीजिक्षेत्रलाई अवसरवादी भन्ने आरोप लाग्ला नि त ?
हामी हरेक सेन्समा व्यापार हेर्छाैं । व्यापार भनेको च्यारिटी होइन । बिजनेस भनेको बिजनेस नै हो, त्यसको केही प्रतिशत समाजसेवा (च्यारिटीमा) छुट्याउने हो । तर, बिजनेसलाई च्यारिटीका रूपमा लिने हो भने सबैभन्दा पहिले त्यही कम्पनी डुब्छ, जुन ठाउँमा बढी सुरक्षा हुन्छ त्यही ठाउँमा जाने हो ।
तपाईंहरूले सरकारको व्यवसायिक समाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा पैसा हाल्दैनौँ भन्नुभयो, किन ?
हाल्दैनौं । हामीले गर्ने भनेको उद्योगनजिकका बालबालिकालाई स्कुल पठाउने हो, स्वास्थ्यचौकी खोल्ने हो । मैले राज्यको कोषमा किन राख्ने ? आयकर ऐनले त १ लाखभन्दा धेरैलाई च्यारिटी मान्दैन भने मैले खर्च कहाँ देखाउने ?
मैले गर्ने त उद्योगको नजिकका बासिन्दालाई हो । मैले त्यो समाजको माया लिनुपर्छ भने मैले त्यहीँ खर्च गर्छु । राज्यलाई हामीले कर दिएका छौं, त्यो त खर्च गर्न सकेको छैन, अब फेरि किन सरकारी कोषमा पैसा दिने । राज्यले डिजेल, सडक सुधार, बूढीगण्डकीबापत खर्बाैं पैसा उठाएर खर्च गर्न सकेको छैन ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्न भनेको छ । त्यो हामी गर्छाैं र त्योभन्दा धेरै पनि गरौँला । राज्यले सीएसआरमा गरेको रकम खर्च लेख्ने व्यवस्था गरिनुप¥यो । खर्च लेख्न दिए १ प्रतिशत होइन, ५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न तयार छौं ।
तपाईंहरूले कारोबार लेख्दा चन्दा, दानलगायतका खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
यो निकै कठिन छ । चेक कोही लिंदैन, नगद नै माग्छन् । अडिटरले यस्तो कारोबार मान्दै मान्दैन । व्यवस्थापन निकै कठिन छ ।
राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रलाई ‘क्यास काउ’ बनाए भन्ने आरोप छ, तपाईंहरूले यसलाई कसरी हेर्नभएको छ ?
राजनीतिक दलले निजी क्षेत्र बुझेकै छैनन् । चुनाव लड्ने बेला सहयोग गर्ने प्रचलन छ । राजनीतिक दललाई चुनाव लड्न सरकारले नै मापदण्ड बनाएर पैसा दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
कुनै व्यवसायी वा उद्योगले १ लाख रुपैयाँ कुनै पार्टीलाई सहयोग गरे उसको सम्पर्क गर्ने आधार त भयो नि । भोलि गएर कत्तिको पे ब्याक गर्छ, त्यो थाहा छैन । त्यो सम्पर्क पनि गलत हो । यसरी चन्दा दिदा पछि सरकारमा गएपछि सहयोग हुन्छ भन्ने पनि होला । तर, यो गलत हो ।
पशुपति मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ